September 13, 2020 September 13, 2020 adminLeaveaComment on एकाबिहानै श्री पशुपतिनाथ को द,र्शन गरी भेटी स्वरूप यक शेयर गर्दै पढ्नुहोस्, आज २०७७ भदौ २८ गते आइतबारको राशिफल
आज २०७७ भदौ २८ गते आइतबारको राशिफल । ज्योतिष शा,स्त्रमा जन्म समय अनुसार फ,लादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दै,निकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भवि,ष्यवा,णी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्यो,तिषी एस्ट्रो राजले यस्तो फ,लादेश गर्नुभएको छ-
सो`खले ख`र्च बढाए पनि मनपर्ने भौ,तिक सा`धन जोड्ने समय छ। हाँसखेल र मनोरञ्जनपूर्ण समय छ । पारिवा`रिक सुख मिल्नुका साथै अध्ययन(अध्यापनको क्षे`त्रमा प्र`गतिको खब`र सुन्न पाउनु हुनेछ । ल`गानी बढाउनुपरे पनि व्यव`साय था`लनी हुनेछ। प्रेमको बन्धन कसिनेछ। सुन्दर पहि`रनले व्यक्ति`त्वमा निखा´रता ल्याउनेछ। अति`थिका रूपमा सत्का´र पाइनेछ। तर कामको सन्द,र्भमा विवा`दास्पद जिम्मे´वारी व´हन गर्नुपर्ला ।
हाकिम, मातापिता वा वि`शिष्ट व्यक्तिको वि´चारले प्रभा`वित तुल्या`उन सक्छ । नो`करी अथवा व्यव`सायसँग स`म्बद्ध कुनै ठो`स परिणाम दे`खा पर्नेछन् । नयाँ योजना प्रार´म्भ गर्न सकिनेछ । आ`यआ`र्जनका विविध स्रो`त फे`ला पर्नेछन्। तर श्र`मको उचित मूल्यां`कन भए पनि प्रति`फलका लागि समय पर्ख`नुपर्नेछ। आँटेको कामको लगा,नी पनि अरूका लागि खर्च हुन सक्छ। सरसापटमा धन बाहि,रिने देखिन्छ । आ`म्दानी रोकिनाले क`र्जाको रकम लिनुपर्ने हुन सक्छ। प्र`गतिमा ई`र्ष्या गर्नेहरूले अव`रोध पुर्याउन सक्छन्।
पारिवारिक सहयो`ग प्राप्त हुनेछ । सानो प्रया`सले नै काम बन्नेछ। सुन्दर पहि`रनमा मन रमाउनेछ। आग`न्तुकहरूको उपहारले प्रस`न्नता मिल्नेछ। कामले जीवनशैली व्य`स्त रहनेछ। दु,र्गमस्था,न र टाढाको या,त्रा सम्भा`वना छ तर अना,वश्यक या,त्राबाट जो,गिनु राम्रो हुन्छ । पछिका लागि कर्म`फल स`ञ्चय गर्ने समय छ। मेह`नतले अवस´र दिला,उनुका साथै दै,निकीमा परि´वर्तन आउनेछ। पहिलेको सफ`लताले उत्सा`ह जगाउनेछ।
परोप´कार र धार्मिक क्षे´त्रमा ल´गानी गरेमा अझ राम्रो हुनेछ । रोकिएका काम सम्पा`दन हुनेछन् । कसैसंग सामान्य विवा`द पनि हुन सक्छ । अध्य´यनमा प्रग´ति हुनेछ । लग`नशी`लताले संक´ल्प पूरा गर्न सकिनेछ। कम`जोर नति`जा सच्या`उन केही काम दोहो´र्याउनुपरे पनि मिहि`नेतले सम्मा`नित स्था`न दिला`उनेछ । आलो`चकहरूले समेत प्रशंसा गर्न थाल्नेछन्। प्रे`म र मित्र`ताको ब`न्धन क`सिलो हुनेछ । शु`भचि`न्तक`हरूको साथ प्रा`प्त हुनाले काममा उत्सा`ह जाग्नेछ। बो`लीको भ`रमा काम सम्पा`दन हुनेछ।
स`म्पूर्ण उ`द्यम र परिश्र`मको राम्रो प्रति´फल प्राप्त हुनेछ । आफ्नो क्षे`त्रमा प्रभु´त्व जमाउँदै दाम, इ´नाम र प्र´तिष्ठा कमा`उने बेला छ। तर अव`सरका लागि वि`वादास्प`द जिम्मे`वारी व`हन गर्नुपर्ला। श`क्तिशा`ली व्यक्तिहरूसँग प्र`तिस्प`र्धा हुन सक्छ। तापनि मि`हिनेत गर्दा पछिका लागि विशेष काममा जग बसाउने अवसर जुट्नेछ। हिम्म`त गर्दा प्रति,ष्ठित जि,म्मेवारी हातपार्न सफ`ल भइनेछ। विशिष्ट व्यक्ति भेट्ने अव,सर जुट्नेछ। आँफूभन्दा वरि,ष्ठ व्यक्तित्व अथवा पर्य,वेक्ष,कका साथमा अति सुमधुर सम्बन्ध रहला।
कतै लामो दूरीको ला,भदा,यी यात्रा गर्नु छ भने आज राम्रो हुन्छ । सामाजिक उ,त्तरदायि,त्व वहन गर्ने समय छ । विश्वासपात्रबाट धोका हुन सक्छ, सज,ग रहनुहोला। नि,र्णय लिएर पनि शंका गर्ने बानीले पछि परिनेछ। परि,स्थितिअ,नुसार चल्न नस,क्ता दु,स्ख पाइनेछ । मह,त्त्वाकां,क्षी यो,जना कार्या,न्वयनमा आफ्नैले बा,धा पुर्या,सउन सक्छन्। अरूको फा,इदाका लागि उपयो,ग भइने सम्भा,वना छ। मा,न्यज,नको मन जि,त्ने प्रय,त्न गर्नुहोला।
नयाँ काम र जि,म्मेवारी हात पार्ने मौ,का छ । पढाइमा पनि राम्रै प्र,गति हुनेछ । आ,र्थिक प,क्ष सब,ल छ । आक,स्मिक ख,र्चले अ,र्थ अ,भाव देखापर्न सक्छ। आफ,न्तबाट टाढिनुपर्ला। व्य,वसायमा लगा,नी बढाउनुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। ला,भप्रद कामले लो,भ्याए पनि फ,जुल ख,र्च हुन सक्छ। अव,सरका लागि क,डा परिश्र,म गर्नुपर्ला। देश–वि,देशको या,त्रा गर्ने प्र,क्रिया अघि बढ्नेछ । छर–छिमेकमा असम,झदारी देखिनेछ भने बेसुरको काममा अ,लम,लिनुपर्ला। स्वा,स्थ्यमा सम,स्या देखा पर्ने देखिन्छ ।
आर्थिक प,क्ष सु,दृढ बन्नेछ । न्या,यिक, का,नुनी वा प्रति,योगिता,त्मक क्रिया,कलापमा वि,जय प्रा,प्त हुनेछ । मनमा दो,धारको अव,स्था सि,र्जना हुनसक्छ । प्रति,स्पर्धाले नयाँ अव,सर दि,लाउन सक्छ। ज,टिल काम समेत सम्पादन हुनेछ । पुरु,षार्थद्वारा प्रति,स्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सकिनेछ। पहिले दु,श्मनी गर्नेहरूले पनि मित्र,ताका हात अघि बढाउनेछन्। काम पूरा नभए पनि आंशिक ला,भको सम्भावना।
अध्या,त्मभाव जा,गृत हुनाले परोप,कारमा मन जानेछ। धेरैले कामको ता,रिफ गर्नेछन्। शुभचि,न्तकहरूले साथ दिनाले पहिलेको चु,नौती स,माप्त होला। दाम, इना,म र प्र,तिष्ठा कमा,उने बेला छ। न`याँ ज्ञा`न प्राप्त हुने यो,ग छ । आर्थिक ला,भ प्राप्त होला । ठूलाबडाको आशी,र्वादले रोकिएको काम बन्नसक्छ । मेह,नतले पदीय जि,म्मेवारी दिलाउनेछ । विशेष अ,वसर प्राप्त हुनाले मन प्रफु,ल्लित हुनेछ। टाढिएका साथीभाइ नजि,किनाले ह,र्ष बढ्नेछ। भा`ग्यले विभिन्न अव,सर थमा`उनेछ।
पारिवा,रिक वाता,वरण तपाईंको अनु`कूल नभए पनि नयाँ कामको प्र`स्ताव आउनेछ भने धन आ`र्जन हुनेछ। बेसुरमा दिइएको व`चनले अ,प्ठ्यारो पर्नेछ। शरीरमा उ,त्साह र उ`मङ्ग प्रा,प्त हुनेछ । स्वास्थ्य सबल रहनेछ र काममा पनि फाइ,दाको यो,ग छ । चि`ताएको काममा सोचेजस्तै सफ,लता मिल्नेछ। प्रे,म र मि`त्रताको ब,न्धन क,सिलो हुनेछ। व्यव,सायको ल,गानीले मन,ग्गे धनला,भ हुनेछ। आ,लस्य त्या`गेर मि,हिनेत गर्नुपर्ने समय छ। प्र`तिस्प`र्धीहरूले समेत सहयो,गका हात फै,लाउनेछन्। नयाँ काम प्रार,म्भ गर्ने समय छ।
सम,स्या दर्साउँदा सहयो,गीहरूको समेत सा`थ प्राप्त हुनेछ। काम पू`र्ण नभए पनि प्रय,त्न गर्दा आं,शिक ला,भ अव,श्यै हुनेछ।क`ल्पना र भा`वनामा के,न्दित भइने छ । बोलीको विप`रीत अ`र्थ लाग्न सक्छ, मुखलाई निय`न्त्रणमा राख्नुहोला । चु`नौतीपूर्ण जिम्मे`वारी वह`न गर्नुपरे पनि बुद्धि–विवे`कले काम गर्न सकिनेछ। अ`प्ठ्यारा परि`स्थितिसँग स`म्झौ`ता गर्नुपरे पनि आ´त्मवि`श्वास, मिहि`नेत र लग`नशील`ताले ल`क्ष्यमा पुर्या्उनेछ।
पढा`इको लगा`वले बौ`द्धिक क्षेत्र फरा´किलो बन्नेछ र लेखन क`लामा निखा`रता आउनेछ। अध्य,यनका लागि भ्र`मणको मौ`का जु`ट्न सक्छ । व्या,पारमा सा`मान्य फा`इदा भए पनि पशुपा`लन र कृषि क्षे`त्रबाट राम्रो ला´भ हुनेछ । रोकि`एका काम बन्नाले नयाँ कामतर्फ अ,ग्रसर भइनेछ। पढाइले`खाइमा प्रग`ति हुनेछ । बौ`द्धिक प्रति´स्पर्धामा सफ`लता हात पर्ला । पशु`पालन तथा कृषि क्षे,त्रबाट राम्रो ला`भ मिल्ने यो`ग छ । प्रति`ष्ठित काम गर्ने अव`सर प्राप्त हुनेछ । दिन उत्सा`हपूर्ण रहनेछ । insider24nepal